Tech Chigadzirwa Mharidzo | Gadget nhau
Iyo tekinoroji chikamu chiri chaizvo chipenyu. Zuva rega rega zvigadzirwa parizvino zvigadzirwa zvitsva kuedza kuwow pamusika nevatengi. Kubva kuActualidad Gadget tinokuunzira dzese nhau dzezviitiko zvekuratidzira zvemarudzi ese emidziyo.
Unoda here kuve kusvika parizvino yezvipi zvigadzirwa zvakaita seSamsung, LG, Sony, Apple, Xioami nevamwe vazhinji varipo?. Zvakanaka, usapotsa chikamu ichi. Tinokupa iwe yakasarudzika mifananidzo nemavhidhiyo yakaitwa nechikwata chedu chekunyora.
Dzazvino nhau pane zvigadzirwa zvigadzirwa
kubudikidza Paco L Gutierrez inoita 9 mwedzi .
Zvishoma nezvishoma nhamba yemalaptop ari kugadzirisa maprosesa avo kuchizvarwa chitsva cheIntel iri ...
Amazon inopa iyo nyowani Moto HD 8 nemakwikwi mutengo
Mahwendefa ndiwo musika unoratidzika kunge wakafa, zvisinei ivo vanoramba vaine inonakidza niche vateereri niche, pa ...
Poco F2 Pro: Zvimwe skrini, kuita kwakawanda uye mutengo wakawanda
Iyo Xiaomi subsidiary inonzi Pocophone yakasvika makore maviri apfuura mumusika weSpain neayo Poco F1, chinongedzo icho ...
Exynos 9825: Iyo processor yeGalaxy Note 10
kubudikidza Eder Esteban inoita 2 makore .
Iyo Galaxy Cherechedzo 10 uye 10+ zviri pamutemo, isu tatoziva izvo Samsung inotisiya neayo matsva ekumusoro-magumo….
Stadia, Google nyowani online mutambo wekutamba, inosvika
kubudikidza Rafa Rodriguez Ballesteros inoita 3 makore .
Isu tanga tichizvizivisa, yaingova nyaya yenguva hofori iro hombe rine guta guru reG rakatanga kufarira mitambo yemavhidhiyo….
Iyi ndiyo nyowani uye inoshamisa Tesla Model Y
Uye ndezvekuti mushure memavhiki mashoma umo kunyange Elon Musk pachake akawedzera kusagadzikana uye kuseka ku ...
Huawei inotangisa iyo Huawei Y7 2019, smartphone yehomwe dzese neAI
Mumakore achangopfuura, taona maitiro eAsia mugadziri Huawei ave kwete chete imwe sarudzo mukati me ...
Isu tinofananidza iyo Samsung Galaxy Fold uye iyo Huawei Mate X
Mavhiki mashoma apfuura tanga tisingazive kana iri ringave gore rekupeta mafoni. Runyerekupe, kufungidzira uye nezvimwe ...
Iyi ndiyo nyowani Sony Xperia 1 yakapihwa kuMWC
Sony zvakare yakaita kuti timuke mangwanani ku world telephony reference event, MWC. Iyo kambani yakatanga ...
Sangana neiyo nyowani Samsung Galaxy Buds mabhuru efoni
Takaita 20 Kukadzi yakamiswa pakarenda kwenguva yakareba. Nhasi kwave kuri Samsung zuva, ...
Pano iwe unogona kuona mhenyu kuvhurwa kweHuawei Mate 20 uye 20 Pro
Nhasi izuva rekutanga uye pakupedzisira isu tichakwanisa kuona zviri pamutemo mutsva weHuawei Mate, ...